Wararka - Iibinta baabuurta korantada ee sanadkan ayaa ka hortagaysa jabka Covid -19 ee suuqa baabuurta adduunka
Tirada gawaarida korontada ee waddada ayaa la filayaa inay gaaraan ku dhawaad ​​10 milyan sannadkan, iyadoo iibku sii kordhayo sannadkan in kasta oo uu jiro masiibada Covid-19, sida lagu sheegay warbixin cusub oo ay soo saartay Wakaaladda Tamarta Caalamiga ah.
Iibinta baabuurta korontada ayaa la filayaa inay ka fiicnaato guud ahaan suuqa baabuurta rakaabka, iyadoo iibinta EV sannadkan ay si ballaaran ula jaan qaadi doonto 2.1 milyan oo la iibiyay sannadka 2019, sida ku cad daabacaaddii ugu dambeysay ee IEA's Global EV Outlook. Tani waxay ku xisaabtami doontaa rikoor 3% wadarta iibka baabuurta adduunka. Iyada oo ku saleysan xogta laga soo bilaabo Janaayo ilaa Abriil sannadkan, wadarta iibka gawaarida rakaabka adduunka sannadkan ayaa lagu wadaa inuu hoos u dhaco 15%.
Faafida Covid-19 waxay saameyn doontaa suuqyada gawaarida adduunka, iyo sida dowladuhu uga jawaabaan masiibada waxay saameyn ku yeelan doontaa xawaaraha u gudubka gawaarida korantada.
Iibinta baabuurta korontada adduunka ayaa korortay ugu yaraan 30 boqolkiiba sanad walba tobankii sano ee la soo dhaafay marka laga reebo 2019, markii koritaanku hoos u dhacay ilaa 6% maaddaama jawigii sharciyeynta uu iska beddelay Shiinaha iyo iibinta baabuurka rakaabka ee qandaraasyada suuqyada waaweyn. Xitaa sidaas oo ay tahay, baabuurta korantadu waxay lahaayeen sannad kale oo banner ah sannadka 2019, iyagoo sugaya saamigoodii ugu sarreeyey abid - 2.6% - suuqa baabuurta adduunka.
Sanadkii la soo dhaafay, gawaarida korontada ayaa si ka duwan suuqyada caalamka oo dhan uga fuliyay. Shiinaha ayaa weli ah suuqa ugu weyn ee baabuurta korontada ku shaqeeya ee adduunka, kaas oo badh la iibiyay sannadka 2019. In ka badan 1 milyan oo baabuur oo koronto ah ayaa lagu iibiyey Shiinaha sannadka 2019, taasoo 2% hoos uga dhacday sannadkii hore. Yurub ayaa ahayd suuqa labaad ee ugu weyn, iyada oo la iibiyay 561,000 baabuur sannadka 2019. Maraykanka ayaa ku xigay oo la iibiyay 327,000 oo baabuur.
Baabuurta korontada ayaa la filayaa inay xisaabtamaan ku dhawaad ​​1% saamiyada baabuurta adduunka ee iibka sanadkan. Si kastaba ha noqotee, warbixintu waxay sharraxaysaa in mowjadaha labaad ee masiibada iyo dib-u-soo-kabashada dhaqaale ee la filayay ay horseedi karto natiijooyin kala duwan. Ugu dambeyntiina, jawaabaha dowladda ee masiibada iyo sida macaamiisha ay uga soo baxaan dhibaatada ayaa go'aamin doonta waxa ku dhacaya suuqyada baabuurta korontada 2020 iyo wixii ka dambeeya.
Baabuurta korontadu waxay door muhiim ah ka ciyaaraan sidii ay u gaadhi lahaayeen himilooyinka bay'ada ee IEA ee Muuqaalka Horumarinta Joogtada ah si loo yareeyo wasakhowga hawada maxalliga ah iyo in wax laga qabto isbeddelka cimilada. Sanadka 2019, dhammaan gawaarida korantada marka la isku daro waxay ka fogaadeen isticmaalka ku dhawaad ​​0.6 milyan oo fuusto oo saliid ah maalin kasta adduunka. Sidoo kale, dhalinta korontada si ay u siiso maraakiibta korontada ee korontada adduunka ayaa soo saaray qiyaastii kala bar qaddarkii laga soo saari lahaa raxan u dhiganta gawaarida mashiinka gubista gudaha.
Xaaladda Horumarinta Joogtada ah, kaydka baabuurta korontada ee adduunka (marka laga reebo laba/saddex lugoodle) waxay koraan 36% sannadkii, iyagoo gaadhaya 245 milyan oo baabuur sannadka 2030-in ka badan 30 jeer oo ka sarreeya heerka maanta. Sannadka 2030, baabuurta korontadu waxay yareeyaan qiiqa GHG ku dhawaad ​​kala bar marka la barbardhigo raxan u dhiganta gawaarida mashiinka gubista gudaha ee ku jira Siyaasadaha La Qoray iyo saddex-meelood laba meelood oo ah Heerka Horumarinta Joogtada ah.
Global EV Outlook, daabacaadda calanka ee Hindisaha Baabuurta Korantada (EVI), wuxuu isku daraa falanqaynta taariikheed saadaasha 2030, isagoo bixinaya aragtiyo muhiim ah oo ku saabsan baabuurka korontada iyo ku dallacidda keenista kaabayaasha, qiimaha lahaanshaha, isticmaalka tamarta, qiiqa kaarboon laba ogsaydh iyo baahida batteriga. Daabacaadda sannadkan waxay falanqaynaysaa horumarka suuqa caalamiga ah ee EV iyo saamaynta Covid-19, horumarinnada siyaasadeed ee dhowaan laga soo qaaday adduunka oo dhan, saadaasha EV ee 2030, farsamada iyo waxqabadka baytariga baytariyada iyo doorarka suurtagalka ah ee EVs ee nidaamyada awoodda.